မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, တရုတ် UnionPay နှင့်တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာ NFC ကိုမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှတ်, NFC ကိုငွေပေးချေမှုတွန်းအားပေးများအတွက် industry.Several ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဈေးကွက်အလားအလာများ NFC ကိုနေ့ခင်းအိပ်မက်ဦးဆောင်, စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းစစ်, စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်မှာ NFC chip ကိုနှင့်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူအများဆုံးတိုက်ရိုက်အကြိုးရှိ.
“NFC ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်ပထမဦးစွာ NFC ကိုမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုပုံစံ, လာသောအခါ NFC ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများခေတ်စားလာ, အားလုံး NFC ကို mode ကိုမျိုးနှင့် NFC ကိုလျှောက်လွှာအခွင့်အလမ်းများရှိလိမ့်မည်, ကားမောင်းသည့် NFC ကိုချစ်ပ်ဖြစ်ကြသည်။” ပြည်တွင်းလူသိများတဲ့ NFC ကို tag ကို chip ကိုပံ့ပိုးပေးအတူတကွ microelectronics ပျံသန်း, လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာမစ္စတာလျူ Jianxin ထောက်ပြ. လျူဟာ NFC ကို tags များအတွက်ချစ်ပ်ဝယ်လိုအားသိသိသာသာတိုးပွားလာပါလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်. ထိုကွောငျ့, သူကပြည်တွင်း NFC ကို chip ကိုထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် NFC ကိုငွေပေးချေမှုလုံးဝအပြုသဘောပါလိမ့်မည်ရှေ့ဆက်အမျိုးသားပြန်လည်တွန်းအားပေးယုံကြည်သော.
“ပထမဦးစွာ NFC ကိုမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှု extension ကို NFC ကိုမိုဘိုင်းဖုန်း၏လူသိများလာပြီးမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်, လာသောအခါ NFC ကိုမိုဘိုင်းလူကြိုက်များလာသောအခါ, အမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့် NFC ကိုလျှောက်လွှာအခွင့်အလမ်းများရှိလိမ့်မည်, အသုံးပြုသောဦးဆောင် NFC ကိုချစ်ပ်. “လူသိများတဲ့ NFC ကို chip ကိုပံ့ပိုးပေးရှန်ဟိုင်း FeiJu microelectronics Manager ကိုလျူ Jianxin ကပြောပါတယ်.
လျူချစ်ပ်များအတွက်ဝယ်လိုအားသိသိသာသာတိုးဘို့ NFC ကိုတံဆိပ်ခံစားခဲ့ရ. ထိုကွောငျ့, သူကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုင်းပြည်အတွင်း NFC ကို chip ကိုထုတ်လုပ်သူတစ် NFC ကိုငွေပေးချေမှုလုံးဝအပြုသဘောပါလိမ့်မည်ယုံကြည်နေ.
တရုတ်တစ်ဦးဦးဆောင် RFID tag များထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, Seabreeze စမတ်ကဒ် Co. ,, Ltd. ,, ၎င်း၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာအားသာချက်များနှင့်အတူ, ထိုကဲ့သို့သောစတစ်ကာများအဖြစ် NFC ကိုထုတ်ကုန်ပေးနိုငျ, ကတ်များ, အကြွေစေ့ tags များ, Epoxy tags များ, keychains, လက်ပတ် / လက်ကောက်, စသည်တို့ကို, especially the newly added automation Sticker and Epoxy tags production lines can meet the needs of large and small customers at home and abroad. (SeabreezeRFID)
prev: ရှန်ကျန်း Seabreeze စမတ်ကဒ် Co. ,, , LTD. ဆောက်လုပ်ဆဲအသစ်များကိုက်ဘ်ဆိုက်, ဒီတော့ညှိနေ.
နောက်တစ်ခု: ဥရောပဗဟိုဘဏ်မိတ်ဆက်အကြံပြုချက်များ, စွပ်စွဲဂယက်ထလက်ငင်းငွေပေးချေမှုရမည့်ဝန်ဆောင်မှု
» ရှန်ကျန်း Seabreeze စမတ်ကဒ် Co. ,, , LTD. ဆောက်လုပ်ဆဲအသစ်များကိုက်ဘ်ဆိုက်, ဒီတော့ညှိနေ.
ရှန်ကျန်း Seabreeze စမတ်ကဒ် Co. ,, , LTD. ဆောက်လုပ်ဆဲအသစ်များကိုက်ဘ်ဆိုက်, ဒီတော့ညှိနေ.